October 5, 2021 - Babal Khabar
Oct52021 by बबाल खबरNo Comments
जति नै सुन्दर भए पनि यस्ती स्त्री सँग तपाईं कुनै पनी हा’लतमा नगर्नुहोस् विहे !
पुरा खबर, जतिनै सुन्दर भएपनि यस्ती स्त्रीसँग तपाईं कुनैपनी हा'लतमा नगर्नुहोस् विहे, नत्र जिननमा सधैं असजिलो मात्र हुनेछ। चाणक्य वा कौटिल्य लगभग इसा पूर्व ३७०–२८३ को समयमा महान सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्यका सल्लाहकार थिए । क्षशिलाका आचार्य, दार्शनिक थिए चाणक्य । उनले नन्द वं'शको ना'श गरेर चन्द्रगुप्त मौर्यलाई राजा बनाए। उनी राजनीति र कूट'नीतिका ज्ञाता थिए। उनले अर्थशास्त्र , राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाजनीति आदिका महान ग्रन्थहरू रचना गरेका थिए । अर्थशास्त्र मौर्यकालीन समाजको दर्पण मानिन्छ । मुद्राराक्षसको अनुसार चाणक्यको वास्तविक नाम विष्णुगुप्त थियो । विष्णुपुराण, भागवत आदि पुराणहरू तथा कथासरित्सागर आदि संस्कृत ग्रन्थहरूमा त चाणक्यको नाम आएकै छ सँगै बौद्ध ग्रन्थहरूमा समेत चा'णक्यको कथा भेटिने गरेको छ। बुद्ध'घोषद्वारा बनाइएको विनयपिटकको टीका तथा महानाम स्थविर रचित महावंशको टीकाम
पर्समा कहिल्यै नराख्नुहाेस् यी चीज, नत्र……
पुरा खबर, प्राय सबैको चाहना हुन्छ कि जीवनमा कहिले पनि धनको कमी नहोस् । त्यही धनको कमी नहोस भन्नका लागि मानिसहरु दिनरात, भोक, तिर्खा नभनीकन मेहनत गरी रहेका हुन्छन् । तर, कतिपय अवस्थामा यति धेरै प्रयास गर्दा पनि सफल हुन सकिँदैन । सोही समस्या समधान गर्नका लागि वास्तु शास्त्रले केही उपायहरु बताएको छ । जसको दैनिक रुपमा पालना गर्नाले लक्ष्मीको साथ सधैँ बनिरहन्छ । –प्रायजसो हरेक मानिसहरुको पर्समा औंषधी राख्ने गर्दछन् । तर, वास्तु शास्त्रको अनुसार त्यो गलत हो । वास्तु शास्त्रको अनुसार औंषधी राख्नाले पैसाको कमी हुन्छ । –महिलाहरु प्रायजसो आफ्नो पर्समा खानेकुराहरु जस्तै चकलेट, बिस्कीट जस्ता खानेकुराहरु राख्ने गर्दछन् ।तसर्थ यस्तो बानी छ भने छुटाउने । वास्तु शास्त्रका अनुसार पर्समा खानेकुरा राख्नाले आर्थिक नोक्सानको संकेत हो । –वास्तु शास्त्रका अनुसार पर्समा कहिले पनि चाबी राख्नु हुँदैन
को हुन् शाहरुखका छोरा आर्यन सँगै पक्राउ परेकी मुनमुन धमेचा ?
पुरा खबर, आइतबार क्रुजमा भएको ड्र'ग्स पार्टीको केसमा ना'रकोटि'क्स क'न्ट्रोल ब्यु'रो (एन'सीबी) ले शाहरुख खानका छोरा आर्यन खानसँगै अरबाज मर्चेन्ट र मुनमुन धमेचा नामका अन्य २ जनालाई पनि गि'रफ्ता'र गरेको छ । अरबाज र मुनमुनको साथबाट ड्र'ग्स पनि बरामद भएको थियो । यी तीनै जनालाई अ'दा'लतले १ दिन हिरा'सतमा राख्न आदेश दिएको थियो । आर्यन खानलाई शाहरुख खानका छोराको रुपमा धेरैले चिन्छन् तर मुनमुन को हुन् भन्ने विषयमा धेरैको चासो बढेको छ । मुनमुन दिल्लीकी मोडल हुन् । खासमा मुनमुनको घर मध्य प्रदेशको सागर जिल्लाको तहसिलीमा हो । अहिले त्यो घरमा कोही बस्दैनन् । मुनमुनकी आमाको गत वर्ष नि'धन भएको थियो । उनका पिताको पहिले नै नि'धन भइसकेको थियो । मुनमुनका एक भाइ पनि छन् जसको नाम प्रिन्स हो । प्रिन्स दिल्लीमा काम गर्छन् । मुनमुनले स्कुलको पढाइ मध्यप्रदेशको सागरमै पूरा गरेकी हुन् । पछि मुनमुन भोपालमा